Xeerarka cusub ee horraanta sannadka hirgeli doona - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xeerarka cusub ee horraanta sannadka hirgeli doona
La daabacay tisdag 29 december 2015 kl 13.03
Xeerar cusub iyo kuwo la badaley
Buugga xeerar iyo dubbaha maxkamadda
Sida caadiga ah horraanta sannadka ayey hir-galaan shuruuc hor leh ama kuwo horey u jirey oo wax laga bedeley.
Xeerarka cusub ayey ka mid yihiin iyada oo bil saddexaad lagu daray, lagana dhigay khasab in aabbuhu fasax u qaato kolka ey ilmo u dhashaan, halkii ay horey uga ahaan jireen laba bilood oo keliya inuu aabbuhu ku khasbanaa inuu qaato. Iyada oo wax laga bedeley nidaamkii rot- iyo rut-ee dawladdu dhaqaalaha qeyb ka bixin jirtay kolka howl laga qabto guryaha ama dhallaanku ey guryaha ku helaan wax-barasho dheeri ah oo waalidku u ballamiyeen macallimmiin, qiimaha batroolka oo kor loo qaado iyo suurtagalka ah in tareemmada iyo gaadiidka kale la isaga kontrooli karo waraaqaha aqoonsiga ee xuduudaha Sweden soo gaara.
Xeerarka cusub ee hir-geli doona aadna loo hadal hayay ayuu ka mid yahay xeer ka in dawladdu ku soo rogi karto gaadiidka soo gaara xuduudaha dalka ee basaska, tareemmada iyo doomaha lagu soo rogo kontroolka ah warqaaqaha aqoonsiga. Hoowlahan ayaa lagu tallaab-san doonaa haddii ay dhacdo xaalad halis ku ah hab-socodka bulshada ama ammaanka dalka gudihiisa. Iyadoona ay dawladdu ku qiimeeysay inuu dalku galay xaalad noocaasi ah. Xeerkanna uu hir-geli doono laga bilaabo 4-ta bisha jannaayo ee foodda innagu soo haysa ee sannadka 2016. Qaxootiga soo gaara xuduudaha dalka ayaa ku khasbanaan doona iney sitaan waraaqo aqoonsi si ey xuduudda Sweden uga soo gudbaan, tallaabadaasina oo looga gol leeyahay sidii loogu dhimi lahaa tirada soo-galootiga ee dalka timaadda.
Wasiirka kaabeyaasha dhaqaale Anna Johansson (S) ayaa sidan ku macneeysay fikirka xeerkan ka dambeeya, mar ay ka qayb qaadaneeysay dood dhex-tiiley xubnaha baarlamanka ee dalka:
- Waxaa jirta in nidaamka dalk ee qaabilaadda soo galootiga iyo nidaamka hab-nolol-wanaaga uu dalku ku dhaqmaa ey galeen ciriiri ballaaran. Sidaa daraaddeedna ay dawladda ula muuqatay in loo baahan yahay sidii wax looga qaban lahaa, loogana gaari lahaa go’aammo wax ku ool ah. Dawladduna is tustay in haddii aan wax aga qaban ay xaaladdu ka sii xumaan karto.
Xeerarka la kow-san doona sannadka foodda innagu soo haya ayuu ka mid yahay in la tirtiro ama la joojiyo nidaamka Lotsar ee shirkaduhu uga howl-geli jireen ajaaniibta dalka ku cusub iyo sidii ey dalka ula qab-san lahaayeen, hase yeeshee ey howlahaasi horeyba u istaageen, middaasi ayaana ka dambeeysay in xafiiska shaqadu uu bishii feeberaayo ee sannadkan gabagabada ku jira 2015 uu ka joojiyo howlahaa shirkadaha. Xafiiskuna uu middaa ku macneeyay in ey soo gaareen warar sheegeya in falal-dembiyeedyo lagu dhaqmo. Agaasimaha guud ee xafiiska shaqada Mikael Sjöberg ayaa xilligaasi sidan ku macneeyay go’aankooda:
- Dhibaatooyin in muddaba soo jiitamaayey ayaa ka sii ballaartey oo ka sii xumaadey. Iminka waxaa na soo gaara warar badan ee dembiyo culculus oo qeyb ka yihiin handadaad iyo baad. Annaguna ma xaqiijin karno tayada iyo ammaanka nidaamka wax intaasi dhaafsii-san.
Waxaa sidoo kale laga bilaabo 1-da bisha feeberaayo 2016 la baabi’iyey nidaamkii saqafka ee xannuunka. Xeerkaasina oo macnihiisu yahay in shakhsiga laga saari karin ceeymiska ama aan laga joojin karin gunnada xannuunka muddo cayiman dabadeed. Sida uu xeerku iminka u qoran yahay ayuu wuxuu shakhsigu xaq u leeyahay ugu ceeymis xanuun ugu badnaan laba sannadood iyo bar. Xeerkaasina oo ahaa mid dood badani ka dhalatay.
Waxaa is-bedel lagu sameeyn doonaa dhaqaalaha ey dawladdu ku bixiso adeegyada rut- iyo rot. Iyadoona laga bilaabo horraanta sannadka 2016 adeegyada ay dawladdu ku deeqi doonto oo keliya ugu badnaan 30%, halka ay iminka ka tahay 50%. Halka adeega howlaha guryaha waxa lagu magacaabo rut aaney suurtagal noqon doonin dhaqaale ka badan 25 000 oo koron, halka ey iminka ka tahay 50 000 koron, marka laga reebo da’da 65 iyo ciddii ka wayn. Waxaa sidoo kale nidaamka rut laga saarey cunna karinta, qaban-qaabada casumaadaha iyo adeegyada raaxada leh.
Erik Ullenhag, ahna af-hayeenka arrimmaha dhaqaalaha ee xisbiga Liberalerna (l) ayaa cabsi ka muujiyay caqabadaha ay siyaasaddani u hor-seedi karto shaqada:
- Sweden waxaa ka jira shaqooyin aan badneyn oo sahlan ama ey qaban karaan dadyoowga aan tacliinta lahayn. Waa tallaabo lagu adkeeyneyo xadka lagu soo geli karo suuqa shaqada.
Waxaa kor loo qaadi doonaa canshuurta batroolka iyo diiselka, canshuurta ayaa lga dhimi doonaa gunnadka howl-gabka ee hooseeysa, halka si taertiib tartiib ah looga jari doono dadyoowga qaata mushaarooyinka sare cashuuraha loo daayo waxa lagu magacaabo jobbskatteavdraget.
Horraanta sannadka waxaa sidoo kale la wada gaarsiiyey inuu qaban doono dhammaan goob kasta oo uu ka dhaco EU shakhsiga laga mamnuuco inuu ka ag-dhowaado si uu dembi uga galo, handadaad u geeysto ruux kale. Middaasi ayay macnaheedu tahay in waddan EU ka mid ah haddii maxkamadi go’aanka mamnuuca gaarto inuu sidoo kale ka hir-geli doono dalkan Sweden iyo sidoo kale haddii uu go’aankaasi Sweden ka dhacana wuxuu ka hir-geleyaa dhammaan waddammada EU.
Waxaa sidoo kale lagu kor-dhiyey nidaamka ceeymiska qooyska bisha khasabka saddexaad ee waalidka, waxa lagu magacaabo pappamånad oo hir-geli doona horraanta 2016. Middaa ay macnaheedu tahay in labada waalid uu mid waliba ku khasban yahay oo aannu siin karin waalidka kale saddex bilood kolka ey ilmo u dhashaan. Xeerkan ayaa looga gol leeyahay sidii kor loogu qaadi lahaa muddada ey aabbeyaashu xannaaneeyaan dhallaankooda da’da yar. Wasiirka ceeymiska bulshada Annika Strandhäll:
- Tallaabadani waa mid aannu muddaba ku hamineeyney. Waa tallaabo kubbadda oo kale wareeg isugu xiran sidii loo gaari lahaa sinnaan iyo muddada dhallaanka la hayo oo si siman loo qaybsado.
Waxaa sidoo kale meesha laga saarey xeerkii degmooyinka ee dhaqaalaha xannaaneeynta dhallaanka illaa ey saddex sannadood ka gaaraa oo waalidku uu ilmaha guriga ku heey-san karey isaga oo gunno ku qaadanaya. Taageeradan dhaqaale ayaa lagu dhaleeceeyey iney caqabad ku tahay nidaamyada is-dhex-galka iyo sinnaanta, maadaama ey qaar badan oo qaata gunnaddaasi yihiin haween asal ahaan dibadda ka soo jeeda, isla-markaana ay hooseeyso heerkeeda tacliineed, halkii ey shaqo ka dalban lahaayeen. Hase yeeshee guud ahaan dadka dalbaday gunnadaasi yihiin kuwo aan sidaa u tira badneyn. Balse iminka guud ahaan la joojin doono.
Isha/ Ekot, regeringen.se, riksdagen.se, altinget.se